Amazon inotanga kuverenga pasi kune yayo "Prime Day" | ECommerce nhau
Amazon inotanga kuverenga pasi kune yayo "Prime Day"
Iyo Amazon kambani yakamisikidza zuva uye yako yako chechitatu gore "Prime Day", iro zuva richava Chikunguru 11, ichivimbisa kushambadza kwayo kukuru uye kwakanakisa iyo ine maawa makumi matatu ekutenga kutanga na30: 6 masikati nePacific nguva muna Chikunguru 00.
Iyo kambani yakawedzera chiitiko ichi kuChina, India neMexico, kuitira kuti isvike yakazara 13 misika yepasi rese. Amazon ichakwikwidzana nemumwe wevanonyanya kukwikwidza, kusanganisira iyo China e-commerce "Alibaba", sezvo kutengesa kunze kwenyika kwawedzera zvakanyanya kune e-commerce.
Amazon iri kupa mitengo yakadzikira mumazuva makumi matatu nemakumi matatu nemazana emazana nezviuru zvezvipo, nemamiriyoni ezvinhu zvirimo, sekureva kwemukati Julie Lawson.
Kunyangwe iyo kambani yakawedzera huwandu hwayo hwekutengesa gore rapfuura uye yawedzera kuwanda kwayo, zvinokwanisika kuti zvimwe zvinhu zvichatengeswa zvizere panguva yekusimudzira iyi.
Kukwidziridzwa kunoonekwa sechikamu chakakosha chehurongwa hweAmazon kukura nhengo yayo yePrimary, iyo yakapetwa kaviri kubvira gore rapfuura kune mamirioni makumi masere enhengo. Nhengo dzePrimary vanoshandisa avhareji yemadhora chiuru nemazana matatu pagore, zvichienzaniswa nevasiri nhengo vanoshandisa avhareji yemadhora mazana manomwe pagore.
Amazon yakazivisa zhizha rapfuura kuti kechipiri pagore "Zuva Guru" ichave nekutengesa kukuru kwegore pazuva rimwe chete irori, kutengesa kuri kukwira nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvichienzaniswa nemamwe mazuva egore.
Uku kusimudzira kwaita basa rakanaka rekugadzira nhengo dzeMakurukota.
Hazvisati zvava pachena kuti sei vakwikwidzi vakaita saWalmart vanoronga kupindura pachiitiko chavo gore rino. Gore rakapera Walmart yakapa mazuva mashanu ekutakura mahara uye yayo yakadzikira yekutengesa.
Gore rino richatiunzira zvakawanda zvinoshamisa, asi ini ndinovimba kuti Amazon ine yakanaka yekutengesa pazuva rechitatu pagore "Prime Day."
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Amazon inotanga kuverenga pasi kune yayo "Prime Day"
Chii chinonzi Bitcoin? uye ndeyei
B2B chikuva "Crowdfox" inopeta kutengesa kwayo